ဝယ်ယူမှုအားလုံးတွင် VIP နှစ်ဆရရှိရန်အချိန်ကုန်ပြီ LEGO.com၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တွင်သင်မြင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောလျှော့စျေးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ရှားပါးသည် (နှင့်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်မကြားဖူးပါ) ၁၀၂၇၆ Colosseum, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် နှင့် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon မည်သည့်လျှော့စျေးကိုမဆိုခံစားပါ၊ ထို့ကြောင့် VIP အချက်နှစ်ချက်သည်နည်းပညာအရဈေးအကြီးဆုံးသောပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအပေးအယူဖြစ်သည် Lego Group မှကမ်းလှမ်းရန်ရှိပါတယ်။
ပုံမှန် VIP အစီအစဉ်သည်အနာဂတ် ၀ ယ်ယူမှုများ (သို့မဟုတ်သီးသန့်ဆုများ) အတွက်သုံးစွဲရန်ငွေပြန်အမ်းငွေ ၅% နှင့်ညီမျှသောနေရာတွင်မှာယူပါ LEGO.com ဇူလိုင်လ 18 သည်အထိကုန်ပစ္စည်းအားလုံးဖြတ်ပြီးရမှတ်အတွက်ပြန် 10% ဝင်ငွေပါလိမ့်မယ်။ ယခုလကဲ့သို့အသစ်ထွက်ရှိသည့်စုံများလည်းပါ ၀ င်သည် 21327 လက်နှိပ်စက် နှင့်ပြီးခဲ့သည့်လကရဲ့ 76178 နေ့စဉ် Bugle.
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ နှစ်ဆ VIP အချက်များပေါ်ကောက်ယူရန်အကောင်းဆုံးစုံ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးဘို့။ သင်သည်သင်၏လက်ဆောင်ကို ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ သင်၏အမှာစာကိုယူလိုလျှင် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Charles Dickens Tribute (သို့) ၄၀၄၈၆ ဆိုပါစို့ adidas ဒေသအားလုံးတွင်မူရင်းစူပါစတား - ဒီမှာအနည်းငယ်အကြံပြုချက်များပါပဲ သင့်တောင်းကိုဖြည့်ရန်ပစ္စည်းများအတွက်။
တနင်္ဂနွေနေ့ (ဇူလိုင် ၁၈ ရက်) ကစားပွဲပြီးဆုံးချိန်အထိသင်ရရှိနိူင်သည်။ ထောက်ပံ့ဖို့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီးအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← Lego Ideas 21328 Seinfeld ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများသည် online ဖြစ်သည်
အခမဲ့ LEGO polybag မြှင့်တင်ရေး startဒီနေ့ LEGO.com မှာ →